Dhulkaaga oo loo jihaado ama loo dhinto
Waxaa loo idmay kuwa lala dagaalami (inay dagaalamaan) maxaa yeelay waa la dulmiyey Allaahna gargaarkooda waa karaa. Waana kuwa laga bixiyey guryahoodii xaq darro iyo inay dhaheen Rabigeen waa Allaheen, hadayna jirin ku difaacida Allaah dadka qaarkood qaar, waxaa la dumin lahaa Macaabidda Yuhuuda, iyo Biyac Kaniisadaha, iyo Kaniisadaha dad kale, iyo Masaajidda lagu xuso dhexdeeda magaca Allaah wax badan, wuuna u Gargaari Allaah cidii u Gargaarta, Allaahna waa Xoog Badane Adkaada (Suural Al-Xajj aayadaha 39-40).
Ka waran madaxdii Bani Israa’iil, Muuse ka dib markay ku dhaheen Nabigooda noo soo bixi Malik/boqor oon ku dagaalanno Jidka Allaah, wuxuu yiri armaad mudantihiin hadii la idin ku faradyeelo dagaalka inaydaan dagaalamin, waxayna dhaheen maxay aanaan ugu dagaalamayn jidka Allaah iyadoo nalaka bixiyey guryahayagii iyo caruurtayadii, markii lagu faradhyeelay korkooda dagaalkii way jeedsadeen, inyar oo ka mid ah mooyee, Allaah waa ogyahay daalimiinta (Aayadda 246 ee Suurat Al-Baqarah).
Markii Nabi Muuse ku yiri reer Bani Israa’iil (qoomkayoow gala dhulka la daahiriyey oo idiin yaboohay Allaah, hana unoqonina gadaashiina oo gadoontaan idinkoo khasaaray (aayadda 21 ee Al-Maa’idah).
Bal aan u galno waxay Soomaalidu ka tiri. “Gayigaaga waa loo dhintaa yaad gawaab noqone. Hadii aanan dhulkaygoow dhiig cadaawe kuu galin Soomaali kama dhalan”.
Qof walba waa garanayaa ka dhiidhigii gumaysayaashii Yurub. Dadkii u kacay Soomaaliya oo qof walba maskaxdiisa ku jirta. Axmed Guray kasoo biloow, Sayidka ku dar, Faarax Oomaar, Maxamuud Xarbi, Xalane, Xaawo Taako iyo kuwo kale. Xataa intii aan dowladnimada qaadanay waxaa jiray dagaal uu cadowga Itoobiya nagu soo qaaday sidii kii ka dhacay Waqooyiga Soomaaliya. Wuxuu qofkii taariikhda yaqaan xasuusanayaa geesigii Xalane markii uu lahaa: cadowgu bir maahee burburiya, ciiddayda uddiida cadaawaha inuu cagaha soo dhigo. Nasiib darro meesha qabqablayaasha qaarkood moodo inay leeyihiin cadowgu waa bade ha ubbixina, ciideena u ogolaada walaalaheena (Amxaarada).
Sidoo kale waa kii abwaankii uu lahaa:
“Hashii goodankeedii rag badan goodku ku casheeyey
Hashii labada gaal ee is barkani………………
Hashaan gaadda waynoow libaax uga gaboon waayey
Inaan goroyo cowl uga tagaa waa wax soo guraye.
Wuxuu Abwaanku ka wadaa dhulkii aan Ingiriis iyo Talyaani uga tagi waayey oo aan ka saaray in Xabashi xumi iga qaado waa waxaan dhici Karin.
Waxaan xasuustaa heeso ku qornaa buugta Afsoomaaliga ee dugsiyada hoose dhexe oo ay laga matalayo arday yaryar oo isu celcelinaysa:
“Waxaan doonayaa inaan duulo’oo, Danood iyo Wajeer Dirirdhabe iyo Harar, dalka nala ka dhacay dib usoo ceshoo”. Mid kalana wuxuu yiri:
“Waxaan doonayaa inaan duulo’oo buuraha dadbane dalkayaga ku yaal waxa dahab ku jira soo dibad baxshee”.
Qolooyin badan oo aad xitaa ku arkaysid website-yada, dhulka ka maqan waa dhul xor ah sida Laascaano, Buuhoodle iyo Sanaag. Waxayna ku hamiyayaan inay gacanta ku dhigaan. Xaggee Laascaano iyo Hawd ka jiraa qofka Hargeysa jooga. Waxaan jeclaan lahaa inay ku hamiyaan inay Xarshin gacanta ku dhigaan.
Heesihii Radio Muqdisho laga qaadi jiray wax yar ka hor 1977 waxaa ka mid ahaa:
“Ashtakiyo haddaan Odayo u diray, arliga iga maqan ergo laygu siinayn, aaladayda xoogga leh baan ku aarsan maantee inaan eedi ila jirin Afrikaay ogsoonoow”. Markii ay Soomaalidii ergadii ka quusatay waxay qaadi jireen heeso kale sidan oo kale:
“Digsi malagi galay baa fuud kulul dabaashay markuu dalaq yiraahdaa nolol ugu dambaysay, waanaga dardaarane ayaa uddiga Amxaarada”
Dagaalkii 1977 oo diiftiisii ilaa hadeer aynaan ka soo waaqsan waxaa loo galay wuxuu ahaa dhulkaas dartii. Wixii gabay, guuroow, buraanbur iyo heeso laga tirshay lama soo koobi karo.
Diiqaar waa la ogaa sidii ay u difaacdeen Banuu Shaybaan iyo qabiilooyinkii kale oo Carbeed waana la ogaa hadalladii uu yiri Shiikhu Banuu Shaybaan isagoo dagaal ku dhiiri galinaya: yaa macshara Bakar qof dagaalka ku dhinta oo loo cududaaro ayaa ka fiican mid carara oo badbaada, taxadarku qadarta waxba kama taro, samirku wuxuu ka mid yahay asbaabaha guusha, sharaf ku dhimasho baan rabnaa ee ma rabno dullinimo, mowdka/dhimashada oo la qaabilo ayaa ka fiican in loo dubur jeediyo, dhuunta godkeeda oo lagugu dhufto ayaa ka sharaf badan inay kaaga dhacdo dabo gibinta iyo dhabarka. Waa la ogaa qabiilooyinkaas Carbeed oo maanta u dhigma Ciraaq sidii ay Furus/Beershiya (Persians) oo u dhigmay Maraykanka ay uga guulaysteen. Annagiina Amxaaro ayaa wadnaha noo gashay.
Dagaalkii Axzaab/Khandaq markii Madiina la hareereeyey oo Quraysh iyo xulafadeedii, Qadafaan iyo Yuhuud ay isku dhinac noqdeen ayaa Nabigu (SCW) wuxuu u naxay dadka Madiino wuxuuna Ansaar ku yiri maad timir ku fiirisaan Qadafaan si ay idiin ka tagaan oo dagaalka u joojiyaan. Labadii Sacad waxay Nabiga waydiiyeen in arrintu Waxyi tahay iyo in kale. Nabigu wuxuu yiri waa ra’yi ee Waxyi ma ahan. Waxay dhaheen Nabigii Ilaahayoow waagaan gaalada ahaynba timirta waan ka iibin jirnay, baadna maanaan siin jirin ma hadda oo aan muslim noqonay baan baad siinaynaa. Waxay dhaheen Wallaahi baanan taas yeelayn ee waa noo dagaal.
Waddankaan Ingiriiska oo aan joogo waxaa dabayaaqadii Sanadkii 2002 la qabtay tartan lagu dooranayo toban ka mid ah boqolkii qof ee Britian ugu muhiimsanaa ama ugu caansanaa. Ka dib cod qaadid ka dhacday dhulkaan ayaa dadkii waxay kaalinta koowaad u doorteen Winston Churchill dagaalkii labaad dartiis oo ay dhaheen ninkaasi wuxuu ku samray dagaalkaas oo keeni lahaa inuu Jarmalku na qabsado. Difaacii dhulkiisa ayaa sharafkaa uu ku helay. Waxaa naxdin leh in maanta Soomaalidu ay horboodayaan oo dad badan oo aqoonyahano iska dhigaya ama culimo ama siyaasiyiin ay taageerayaan niman/qabqablayaal ah oo aan labo isku khilaafin dabo dhilifnimadooda iyo dad iyo diin nacaybkooda.
Arrinta dhulkaaga oo loo dhinto waxay ka mid tahay fidrada oo waa arrin ku abuuran muslim iyo gaal. Islaamku arrintaas waa sii booriyey oo waan ognahay Axaadiista tilmaamaysa qofkii naftiisa, maalkiisa iyo cirdigiisa loogu yimaado oo difaacda oo ku dhinta inuu shahiid yahay.
Rumayso ama ha rumaysan waxaa tobonaan sano ka hor dhacday in nin Soomaali ah uu usoo shukaansi tagay gabar. Markii uu aqalkii gabadha yimid bay u timid iyadoo arigooda ka soo noqotay una sheegtay inay soo aragtay niman hubaysan oo isaga iyo dadkiisa raadinaya markaasay waxay tiri meesha ka carar. Ninkii waxaa ceeb ku noqotay in isagoo shukaansi doon ah uu cararo halkaas bayna raggii inta gurigii yimaadeen ku dileen. Waxaan ognahay in dad noocaas oo kale ah ay galeen dagaalkii 77-dii ayna muujiyeen geesinamadii la arkay. Sida aan ognahay fahanka Diinta Islaamku ma jiro maalin uu maanta ka badan tahay Soomaaliya waxaad arkaysaa dhalinyaro da’ yar oo Quraanka tafsiirkiisa iyo kutubbada Axaadiista ah ee loo yaqaan Umuhaatu Sitah wada yaqaan oo meerinaya. Laakiin maxaa si ka ah dhalinyaradaas. Waxaad arkaysaa jirrida, mooryaanta iyo daydaygu inay ogolyihiin inay ku dhintaan shilin uu cunto, sigaar ama qaad ku gato laakiin dadkii diinta fahmay ma ogola in dhib u gaarto dhulkiisa, dadkiisa iyo diintiisa.
Hadda waan aragnaa in wiilal yar yar oo Maraykan iyo Ingiriis ah ay joogaan Khaliijka si ay Saadaam ula dagaalaan oo ay meesha uga qaadaan. Maxaa anaga noo diiday in dhalinyaradu isu diyaariso difaaca wadankooda iyadoo ay Xabashidu noogu timaado wadankeena?!